Pindura US dhora Kuti Euro
Exchange rate weekly 29/06/2022 22:14
US dhora Kuti Euro kutendeuka. US dhora mutengo mu Euro nhasi pamari yemari yemari.
10 US dhora = 9.57 Euro
Mari yekutsinhana mari ine avhareji kukosha pazuva. Nhamba yekutsinhana kubva kune dzakasimbiswa zvinyorwa. Zvese zvekuchinjana mari mashandiro anoitwa mumabhangi. 1 US dhora yakawedzera ne 0.00767 Euro. Nhasi US dhora iri kukwira ku Euro. Mutengo we1 US dhora ikozvino yakaenzana 0.96 Euro.
Exchange zvazvingava US dhora Kuti Euro
Mwedzi mitatu yadarika, US dhora inogona kutengeswa 0.90 Euro. Makore matatu apfuura, US dhora inogona kutengeswa 0.88 Euro. Makumi emakore apfuura, US dhora inogona kuchinjaniswa kwe 0.85 0 Euro. Chati yero rekutsinhana iri pane peji. Shanduko yemari yekutsinhaniswa kwe US dhora kusvika ku Euro kwevhiki iri 0.44%. Kwemwedzi, US dhora kusvika ku Euro mwero wekutsinhana wakachinja ne -1.82%.
Currency converter US dhora Euro
US dhora (USD) Kuti Euro (EUR)
10 US dhora 9.57 Euro
50 US dhora 47.86 Euro
100 US dhora 95.72 Euro
250 US dhora 239.30 Euro
500 US dhora 478.61 Euro
1 000 US dhora 957.21 Euro
2 500 US dhora 2 393.03 Euro
5 000 US dhora 4 786.05 Euro
Unogona kutenga 10 US dhora ye 9.57 Euro . Mari inoshandurwa nhasi ye 25 US dhora inopa 23.93 Euro. Nhasi, 47.86 Euro inogona kutengeswa ye 50 US dhora. Nhasi, 100 US dhora inogona kuchinjaniswa kwe 95.72 Euro. Nhasi, 239.30 Euro inogona kutengeswa ye 250 US dhora. Shanduri yemari ikozvino inopa 478.61 Euro ye 500 US dhora.
US dhora Kuti Euro Exchange zvazvingava
US dhora Kuti Euro nhasi pa 29 Chikumi 2022
26.06.2022 0.952816 -
Nhasi 500 USD = 0.949868 EUR. US dhora kusvika Euro on 29 Chikumi 2022 - 0.952021 Euro. US dhora kusvika Euro on 28 Chikumi 2022 - 0.952021 Euro. Iyo yakakwira USD / EUR mwero wekutsinhanisa mu yaive pa 27.06.2022. 26 Chikumi 2022, 1 US dhora = 0.952816 Euro.
US dhora Kuti Euro Gengi nhoroondo
US dhora uye Euro zviratidzo zvemari uye nyika